ယနေ့ခေတ်မှာ ရေပန်းအစားဆုံးစကား လူတိုင်းဖြစ်ချင်နေတဲ့ဘ၀ အဲဒီနာမည်အခေါ်ခံရတာကိုပဲ မိမိကိုယ် မိမိယုံကြည်ချက်ရှိသူတစ်ဦးပီပီ အားလုံးရဲ့ပါးစပ်ဖျားကနေ တသသဖြစ်နေကြတဲ့စကားအခေါ်အဝေါ် အဲဒီအရာကတော့ ဘောစိ…… ကိုကျော်ဝင်းမောင်က ထိုသို့အခေါ်ခံရတာကို ကျေနပ်နေသူတစ်ဦးဖြစ်ပြီး အဲလိုအခေါ်ခံရဖို့ကိုပင် မိမိရဲ့ဘ၀ ကိုရင်းခဲ့တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ အသက်ကြီးကြီး မိန်းမကြီးတစ်ဦးကို မရမက၀င်အောင်းပြီးဘောစိ ဆိုတဲ့ဘွဲ့ကိုခံယူလိုက်ပါတယ်။ ယူထားတဲ့ဇနီးမယာကလဲ အရပ်ကပု၊ ပုံစံကလဲဂွမ်းတာကြောင့် မလွမ်း လောက်သော်လည်းပိုင်ဆိုင်မှုက ဘီလျံနာဖြစ်တာကြောင့် ကျော်ဝင်းမောင်တစ်ယောက်ဝင်တာမီယာမှာ ကောင်းကောင်းနေနေရပါတယ်။ လင်မယားနှစ်ယောက်အတူတူ ကားပင်မစီးချင်သော်လည်း Mark X ကို မျက်စိမှိတ်ပြီး ဇိမ်ကျနေတဲ့ အဲဒီဘ၀ကိုပဲ ကျော်ဝင်းမောင်တစ်ယောက်ကျေနပ်နေပါတော့တယ်။ အများက ဘောစိ.. ဘောစိဖြင့်…
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နဲ့ပေါင်းပြီး အိမ်အတွက်သူခိုးအလုပ်ကိုလုပ်ရင်းငွေရှာခဲ့တဲ့ ထက် မှာချစ်သူ ယွန်း ကိုအသိမပေးဘဲနေခဲ့ပေမယ့် ယွန်း မှာအိမ်ကပေးစားတဲ့ မြင့်မိုရ် ကိုလက်ထပ်ခဲ့ရတာကြောင့် ထက် မှာမသိဘဲ မြင့်မိုရ် ရဲ့အိမ်ကိုသွားခိုးခဲ့ရာ ချစ်သူ ယွန်း မှာ မြင့်မိုရ် ရဲ့ရင်ခွင်ထဲမှာတွေ့လိုက်ရတော့ ထက် ဘာဆက်လုပ်မှာလဲ …. ယွန်း ကကောသူခိုးလုပ်စားနေတဲ့ ထက် ကိုခွင့်လွှတ်နိုင်ပါ့မလား ….
ရွှေရည် ရဲ့ရွှာကဆွေမျိုးတွေအိမ်ကိုတစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက် လာရောက်တည်းခိုရာကအစပြုပြီး ဆွေမျိုးများရဲ့နည်းမျိုးစုံဒုက္ခပေးခြင်းကို သူရိန် တစ်ယောက်ကြံ့ကြံ့ခံရင်ဆိုင်နေခဲ့ရပေမယ့် နောက်ဆုံး သူရိန် တစ်ယောက်ဆွေမျိုးများကိုသည်းမခံနိုင်တော့တဲ့အဆုံးမှာ ရွှေရည် ကိုချစ်ပေမယ့်လည်း ဆွေမျိုးတွေကိုဘယ်လိုအိမ်ပေါ်ကနှင်ချမလဲဆိုတာ ဟာသဆန်ဆန်လေးဘယ်လို ကြည့်ရမလဲ ….